Hlala ngaphandle kwesixeko
Krasnyy Poselok, Moscow Oblast, Russia
Iflethi okanye indlu ekwi-complex (icondo) yonke sinombuki zindwendwe onguTatiana
Impelaveki yakho okanye iholide yakho iya kuchithwa ujikelezwe zizindlu zangoku zaseFinnish ezikumgangatho ophantsi kwigumbi elitsha elinesitayile elinazo zonke izinto eziluncedo, ezilungele abantu abayi-2-3.
Kusasa isidlo sakusasa sasehlotyeni kunye nabahlobo kwibalcony okanye ukuhambahamba (ukubaleka kwiindlela zelali). Kunzima ukukhetha ukudlala ibhola ekhatywayo okanye intenetya yetafile, uhambe ngebhayisekile, okanye umeme nje abahlobo kwaye ube nebarbecue. Ukupaka mahala kwemoto yakho ekhaya yibhonasi entle.
Igumbi elinye igumbi 35 sq.m.
kwidolophana yanamhlanje ye-SAMPO, kukho yonke into yokuhlala ekhululekile okanye ixesha elide okanye elifutshane lokuhlala kwintsapho yabantu aba-2 okanye ukuhlala kwansuku zonke kwabantu abayi-3-4.
Eli gumbi linegumbi lokuhlala elinebhedi kunye nebhedi yesofa.Kukwakho ne-TV ehlakaniphile kwigumbi lokuhlala, idesika yomsebenzi kunye nesitulo seofisi kunye nokufikelela kwi-Intanethi. ikhitshi ihlukaniswe kwigumbi lokuhlala ngomnyango kwaye inazo zonke izixhobo eziyimfuneko.
Zonke iiflethi zendlu ziye zahlaziywa, ngoko ke ukuthula, indalo kunye neziseko eziphuhlisiwe kakhulu zommandla waseMoscow zikulindele.
I-Sampo ikwiNtshona yeNgingqi yaseMoscow, yeyona ndawo inobuhlobo nokusingqongileyo kwaye ihloniphekile. Ukusondela kweMoscow, iikhilomitha ezingama-23 ukusuka eMoscow Ring Road, eyona ndlela ibanzi kwaye ikhawuleza kakhulu yeNovorizhskoe.
Mna, Tatiana, umnini wendlu, uya kuhlala evuya ukuphendula imibuzo yakho ngefowuni nangomntu!
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Krasnyy Poselok